warkii.com » Somaliland oo xog muhiim ah ka bixisay Faaida ugu jirta Xiriirka maamulka Twain
Somaliland oo xog muhiim ah ka bixisay Faaida ugu jirta Xiriirka maamulka Twain
Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland, Mudane Liibaan Yuusuf Cismaan, ayaa shaaciyey in xiriirka ay yeesheen Somaliland iyo Taiwan uu noqon doono mid adag oo labada dalba ugu jirto masaalix wadajir ahi.
Xiriirka Somaliland iyo Taiwan wuxuu bilaabmay muddo hore, waxaanu soo maray marxalado kala duwan. Wuxuu ku bilowday Arrimaha Caafimaadka iyo Waxbarashada. Mana ay jirin kullamo rasmi ah oo ay yeesheen madaxda labada dhinac.
“Waxaan rumaysan nahay in ay jirto fursad weyn oo labada dalba faa’iido ugu jirto. Taiwan waa dal horumaray oo ka faa’iidaysan kara bogcada muhiimka ah ee ay Jamhuuriyadda Somaliland ku taallo, taasi oo kadin ama marin u ah dalalka aan badda lahayn ee Afrika” ayuu yiri Wasiir ku xigeenka.
Waxaa uu intaasi kusii daray “Waxa kaloo ay Somaliland leedahay khayraad dihin oo aan ciddi taaban oo ay ka mid yihiin Kalluumaysiga, Xoolaha nool iyo noocyada kala duwan ee macdanta iyo shiidaalka”
Wasiir ku xigeenka waxaa uu tilmaamay in maalgashadeyaasha Taiwan ay fursad u haysataan inay maalgashadaan wixii labada waddanba dan u ah.